Ndị ahịa B2B Na-achọta Ọganiihu Na Ahịa Ọdịnaya | Martech Zone
Kwa afọ, ego a na-etinye na ya ahịa ahịa atụmatụ dị iche iche na-arị elu. Kpọmkwem, ndị na-ere ahịa ọdịnaya B2B na-achọ inweta mmata nke ọma, ọgbọ na-eduga, nnweta ndị ahịa na iguzosi ike n'ihe, ịzụ ahịa weebụsaịtị, na ire ahịa site na ọdịnaya ha. Dika ndi ahia ahia banyere ihe ha choro iji kesaa ihe ha nwere, nke bu uzo, uzo, na uzo ndi na-enweta uru kasịnụ? LinkedIn soro na AzụmaahịaProfs na Ụlọọrụ Marketing Content iji zaa ajụjụ a, ma kwatuo ọdịdị ala dị ugbu a.
Data na-egosi na 73% nke ndị na-ere ahịa na-ekepụta ọdịnaya karịa ha mere n'afọ gara aga na ndị ọchụnta ego na-aga nke ọma na-akwalite ọdịnaya ha na nyiwe mgbasa ozi 7, dịka naanị 4 nke ndị otu na-adịchaghị mma. Ihe omuma ihe omuma na-egosiputa otu n'ime uzo kacha eme nke oma, na-eto eto na 51% nke ndi ahia B2B n'afọ a, rue 13% site na afo gara aga. 91% nke ndị na-ere ahịa B2B na-ahọrọ ịkwalite ọdịnaya ha na LinkedIn, na-esote Twitter na 85%. Choputa uzo ahia ndi ahia B2B na-eji otutu ihe ha kwenyere na nke kachasi infographic n'okpuru.
Tags: b2b ahia ahiab2b dataozi b2bcontent Marketinginfographicmarketing
Nov 14, 2013 na 9:48 AM
Kelsey, nnukwu data ebe a !! Ezigbo ihe ọmụma iji nyere ndị ahịa ndị ọzọ aka ịhụ ihe ndị isi ahịa na-eme nke ọma !!
Mgbasa ozi WallStreet
Nov 14, 2013 na 8:36 PM
Daalụ nke ukwuu! Obi dị m ụtọ na ị nwere mmasị na post na ihe ngosi.